Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin (နောက်ဆုံးပိုင်း) - News @ M-Media
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin (နောက်ဆုံးပိုင်း)
in ဆောင်းပါး — September 22, 2017
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin
၁၉၄၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ Raphael ဟာ သွေးတိုးကြောင့် ဆေးရုံတက်ရပါတယ်။ ဆေးရုံတက်တက်ချင်းရက်မှာပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မှာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ ကျင်းပတော့မယ့်အကြောင်း စကြားရပါတယ်။ Raphael ဟာ ချက်ချင်းပဲ ဥရောပကနေ အမေရိကန် နယူးယောက်ကို ပြန်ချီတက်ပါတော့တယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ညီလာခံ ခန်းမဆောင်မှာ သံတမန်တွေ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရေရေလည်လည် ဦးနှောက်စားမည့် ချက်ကျလက်ကျ ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ ချောင်ပိတ်မယ့် လူတယောက်ကို မမြင်ချင်မှ အဆုံး တွေ့နေရတော့တာပါပဲ။ တွန့်ကျေနေတဲ့ ကုတ်အင်္ကျီ၊ ခေါက်ပွနေတဲ့ ဘောင်းဘီ၊ ဆေးရောင်တွေ အဖတ်လိုက် အဖတ်လိုက်ကွာကျနေလို့ ဖြူ တကွက် မဲတကွက် ဖြစ်နေတဲ့ ရှူးဖိနပ် စာရွက်စာတမ်းတွေ မှတ်စုတွေ မှတ်တမ်းတွေကို အိပ်ကပ်ထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ထည့်ထားပြီး ညီလာခံ ခန်းမဆောင် စားပွဲရုံ နေရာတကာပတ်သွားနေတဲ့ Raphael ဟာ ဘယ်သံတမန်ကို တွေ့လိုက်မလဲ တွေ့လိုက်တာနဲ့ လက်စွဲပြီး genocide နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဥပဒေပြဌာန်းဖို့လိုကြောင်း စာရွက်စာတမ်းတွေ ဥပဒေအထောက်အထားတွေ တရွက်ပြီးတရွက် အိတ်ကပ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး သူရှင်းပြပါတော့တယ် သံတမန်ဖတ်ဖို့လဲ လိုအပ်တဲ့ စာတမ်းတွေ ညွှန်ပါဦးမယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်လွန်းပြီး ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ဖြစ်ရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ဆိုတာ တင်စားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်ကို မစားမသောက် မမောမပမ်း ပြောရင်းနဲ့ ဘိုင်းခနဲ ပစ်လဲသွားတာလဲ အကြိမ်ကြိမ် ပါ။ သံတမန် ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဆိုတာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ပေးအပ်လိုက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်က ရှိပြီးသားပါ။ ညီလာခံတက်ရတဲ့အပြင် ဘေးပန်းဆွေးနွေးပွဲတွေကလဲ အများအပြားပါ ဒီလို ညီလာခံမျိုးမှာ အချိန်ဆိုတာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရှားပါးလှတဲ့ အချိန်တွေကို လာလာဖဲ့ထုတ်နေတဲ့ Raphael ဟာ ကိုယ်စားလှယ်တော်များအတွက် အနှောက့်အယှက်ကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်၊ ဘယ်အဖွဲ့စည်းကမှလဲ စေလွှတ်တာမဟုတ်၊ သူ့ဖာသာ တယောက်တည်းလာပြီး တကိုယ်တော်ကျဲနေတဲ့ Raphael ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံရဲ့ အမြင့်ဆုံး UN General Assembly မှာ ဘသူကများအရေးစိုက်ပါ့မလဲ။ ဘယ်သူကများသူ့စကားတွေကို လက်ခံပြီး genocide နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ law ပြဌာန်းပေးပါ့မလဲ။
Raphael ရဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကုလသမဂ္ဂ မှာတကိုယ်တော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ယခုဒုတိယအကြိမ်တိုက်ပွဲဟာ ပထမ ကမ္ဘာစစ်အပြီး နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးမှာတိုက်ခဲ့တဲ့ ပထမအကြိမ်တိုက်ပွဲလိုပဲ အရေးနိမ့်သွားလေမလား
Raphael ရဲ့ ကမ္ဘာ့မင်းပရိသတ် အလယ်မှာ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မှုဟာ အချည်းနှီး မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးခံစားထားရတဲ့ ကမ္ဘာ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများဟာ Raphael ရဲ့ ဇွတ်တရွတ်နိုင်တာတချို့ကို ငြိုငြင်ကြပေမယ့် သူ့ရဲ့စကားတွေဟာ သွေးထွက်အောင်မက အလောင်းသန်းနဲ့ချီ တောင်လိုပုံပြီး မှန်တယ်လို့သက်သေရှိခဲ့ပြီကိုးး။
ဒီတော့ Raphael ပေးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို သူတို့ဖတ်ကြပါတယ် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့ ငွေမရှိ အာဏာမရှိ အသိုင်းအဝိုင်းမရှိ နောက်ခံဘာမှ မရှိတဲ့ တကိုယ်တော်ရှေ့နေရဲ့ Genocideနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ကိစ္စ ဟာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ စင်မြင့်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
၁၉၄၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ မှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထွေထွေညီလာခံက Genocide ဟာ တားဆီးရမဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုရယ်လို့ resolution ထွက်လာပါတယ်။ UN General Assembly ရဲ့ formal statement တခုနဲ့ Genocide ဟာ နိုင်ငံရေးပါဝါ သန္ဓေစတည်လာပါတယ်။ Assembly လဲပြီးရော Raphael ဟာ မောလွန်းပမ်းလွန်းလို့ အိပ်ချလိုက်တာ ၂ ရက်တိုင်တိုင်ကြာပါသတဲ့။
ဒါဆို Raphael ရဲ့တိုက်ပွဲဟာ အောင်သွားပြီလား၊ ခြေတလှမ်းရှေ့တိုးသွားတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆက်လျှောက်စရာတွေ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။ resolution ဟာ law မဟုတ်သေးပါဘူး။ law အဆင့်ထိရောက်အောင် ဥပဒေကြမ်းအရင်ရေးပြီး နောက်တကြိမ် General Assembly မှာ အတည်ပြုရမှာပါ။
Genocide နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဥပဒေကြမ်းရေးဖို့ UN က ကော်မတီ တရပ်ဖွဲ့ပါတယ်။ ဒီကော်မတီက ဥပဒေကြမ်းရေးတဲ့နေရာမှာ Raphael အနေနဲ့ သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကြိုးပမ်းရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့က resolution ကိုရေးရာမှ Raphael ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ကူညီခွင့်ကို UN အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ခွင့်ပြုလို့ ဒီ resolution နဲ့ဆက်စပ်ပြီး law ရေးတဲ့ကိစ္စမှာ Raphael ဟာ သိပ်ဖိစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အမှုစကားနဲ့ပြောရ ရင် လမ်းကြောင်းပွင့်သွားပီမို့ သိပ်မခက်ခဲလှတော့ဘူးပေါ့။
Raphael အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ထောက်ခံမဲရဖို့ သွားလိုက်ရတဲ့ ခရီးတွေ လွန်းပျံမတတ် ရေးလိုက်ရတဲ့စာတွေ ရုံးခန်းအပြည့် ၊ ဒီအချိန်မှာ သူဟာ အလုပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ငတ်တလှည့်ပြတ်တလှည့်နဲ့ ဒီအလုပ်ကို လုပ်နေရှာတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ နောက်တကြိမ် General Assembly ရောက်လို့လာပါပြီ။ Raphael ဟာ ညီလာခံအပြင်မှာ ”ငါ genocide အကြောင်း ဇွတ်လိုက်မပြောဖြစ်အောင် သတိနဲ့ထိန်းမယ် မဲပေးတာကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ စောင့်မယ်”စသဖြင့် အောင်စာရင်းကြည့်ခါနီးကျောင်းသားလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ General Assembly မှာ မဲခွဲပါတယ်။ Raphael ဟာ အောင်ပါတယ် ဂုဏ်ထူးမက ရာပြည့်နဲ့အောင်ပါတယ်။
အင်းးးး တကယ်တော့ ဒါဟာ Raphael ရဲ့အောင်ပွဲသက်သက်မဟုတ်ဘူးဗျ။
အမေရိကန် နိုင်ငံကို ခြေဗလာ လက်ဗလာနဲ့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလာတဲ့သူ နိုင်ငံရေးနောက်ခံအသိုင်းအဝိုင်းနောက်ခံတစိုးတစိမှမရှိတဲ့သူ ဥစ္စာဓနဆိုလို့ မူးလို့ရှူ စရာမရှိတဲ့ သူ Dr.Raphael Lemkin ဟာ ကမ္ဘာ့အပြည်ပြည်အထောင်ထောင်သော သံတမန်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ General Assembly မှာ သူ့ရည်မှန်းချက်ကို ထုဆစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါဆို Raphael အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူသင့်ပီ လက်မထောင်သင့်ပြီ၊ ဝံ့ကြွားသင့်ပီမဟုတ်လား။ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးအတွက် Raphael ဟာ ရင်ကော့နေပါပီလား?
General Assembly ခန်းမဆောင်ရဲ့ ဂျောင်ကျကျတနေရာမှာ Raphael ဟာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငင် ငိုကြွေးလို့နေပါတော့တယ်။ အောင်မြင်မှုရဲ့ဗိသုကာရှင်ကို သတင်းထောက်တွေက တွေ့ဆုံဖို့ ချဉ်းကပ်လာရာမှာတော့ Raphael ဟာ တယောက်တည်းနေပါရစေလို့ တောင်းဆိုရှာပါတယ်။ အားရပါးရ ငိုနေရှာတဲ့ Raphael ဟာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ ငိုတာလဲပါသလို၊ သန်းချီသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ လူတွေရဲ့ အလောင်းတွေ အရိုးတွေ အလဟသ မဖြစ်တော့ဘူး အကျိုးရလဒ်တခုတော့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အသိတခုနဲ့ ငိုနေတာပါ ရောပြွမ်းနေတဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ မျက်ရည်အနေနဲ့ စီးဆင်းလာတာပါ ဒီနောက်မှာတော့ Raphael ဟာ ပင်ပန်းမှုကြောင့် ပုံလဲကျသွားခဲ့ပြီး ဆေးရုံ ၂ ပတ်လောက်တက်ယူလိုက်ရပါတယ်။
ဆေးရုံက အဆင်းမှာ Raphael ဟာ သူ့တိုက်ပွဲကိုဆက်ပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Raphael ကတော့ မျှော်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတခုကို အတော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်ခိုင်မာလေသော ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုလုံးကို အနိုင်တိုက်ပြီး စစ်ရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးမှာ super power ဖြစ်လာသော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကိုပါ။ အမေရိကန်သာ genocide တားဆီးရေးနဲ့ အပြစ်ပေးရေး law ကိုပြဌာန်းခဲ့ရင် အတော်ကြီးကို effective ဖြစ်လာမှာပါ။
Raphael အတွက် အထိုးနှက်ခံရဆုံး အပိုင်းကတော့ အိုက်စင်ဟောင်ဝါ သမ္မတ ဖြစ်လာတဲ့အခါပါပဲ အိုက် ဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဥရောပမှာရှိတဲ့ မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့ နံပါတ်၁ စစ်ခေါင်းဆောင်ပါ။ နာဇီတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုလဲ ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ အိုက်က genocide law ကို အပြတ်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆို Raphael စိတ်ဓါတ်ကျပီလား။
Raphael ဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကိုသာမက အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကိုလဲ စာရေးသားဆက်သွယ်ပြီး ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ တ်ုက်တွန်းနေပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်း ဟောပြောပွဲတွေ စာရေးသားဆက်သွယ်မှုတွေ အဆက်မပြတ် လုပ်နေဆဲ စည်းရုံးနေဆဲ တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပါ။
Raphael တိုက်ပွဲဝင်ပုံက ကြမ်းပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်လွှတ်တော် အမတ်တယောက်ဆီ စာရေးတဲ့ပုံက
ဒီလိုပူပြင်းတဲ့လမှာ အလုပ်သဘောနဲ့ စာရေးရတာ အားနာပါတယ် . ဒါပေမဲ့ အောဇ်ဝစ် အကျဉ်းစခန်းက မီးရှို့ခန်းတွေက ဒီထက်ပိုပူမှာ ခင်ဗျားလဲ အသိပါ ။ ဒီတော့ genocide တားဆီးရေးနဲ့ . . . .
Raphael ဟာ ဒီအလုပ်တွေကို အားတုန်း အချိန်ပိုတုန်း လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ထိပ်သီးတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နေရတာ အချိန်ပြည့်ပါ။
ဒါပေမဲ့ Raphael ရဲ့ ဝင်ငွေက No ပါ။
Raphael ဟာ အပေါင်းအသင်းလဲ သိပ်မရှိလှပါဘူး။ လူမှုရေးသဘောလည်းနားမလည်ဘဲ Genocide အပေါ်မှာပဲ အာရုံနှစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ လူတွေ့တိုင်းလဲ ဒါပဲပြောနေတဲ့ စက်ရုပ်လိုပါပဲ
ဥပတိ ခန့်ခန့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကောင်းမွန်တှဲု့ဥပဒေပညာရှင် Raphael သာ ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင် မဆွတ်ခင်ကတည်းက ညွတ်ချင်နေတဲ့ မိန်းမတွေလဲ ရှိပါတယ်။
Raphaelဟာ ဒါတွေကို အာရုံမထားနိုင်လောက်အောင် အလုပ်ထဲပဲ နစ်နေတဲ့သူပါ။
၁၉၅၉ ခု ,သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်မှာ Dr.Raphael Lemkin ဟာ သူအလုပ်လုပ်နေကျ ရုံးခန်းလေးထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ တွန့်ကျေနေတဲ့ သူ့ကုတ်အင်္ကျီကနေ ထိုးထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ တခန်းလုံးပြည့် ပွစာကျဲနေတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ပေးစာပြန်စာတွေ ၊ ဥပဒေစာအုပ်တွေနဲ့ Raphael ဟာ ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတဲ့ပုံစံပါပဲ။
သို့သော် ပုံစံကပုံစံပါ ၊ပကတိကတော့ Raphael ရဲ့ ဝိညဉ်ဟာ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကို စွန့်ခွာသွားခဲ့ရှာပါပြီ။
ယေးလ်ဥပဒေတက္ကသိုလ်မှာ ကထိက အဆင့်ရှိသူ ၊ှု ဥပဒေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ Dr. အဆင့်ရှိသူ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံရဲ့ အမြင့်ဆုံးကိုတက်ပြီး တကိုယ်တော်ကျဲ နိုင်ပွဲထူခဲ့သူ သူ သေဆုံးသွားတော့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ၊
Raphael ရဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းသေဆုံးသွားတဲ့အနေအထားကလဲ မင်းတို့လူသားတွေ genocide တားဆီးဖို့ လုပ်စရာတွေ အများကြီးလိုနေသေးတယ်နော လို့ပြောနေသလိုပါပဲလား။
Raphael ထွန်းညှိသွားတဲ့ ဥပဒေမီးရှူးတိုင်ဟာလဲ ၊မငြိမ်းပေမဲ့ အလင်းလျော့ခဲ့လေပီလားတော့မသိ၊ ၁၉၄၈ UN မှာ Genocide တားဆီးရေး convention ကြီးရှိလျက်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ genocide တွေ ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆို Raphael လုပ်သမျှ သဲထဲရေသွန်ပေါ့
ဒါဆို Raphael ထွန်းညှိခဲ့တဲ့ ဥပဒေမီးရှုးတန်ဆောင်ကို ဆက်လက်ထွန်းညှိသူတွေ ရှိတယ်ပေါ့
Raphael နောက်ပိုင်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သူတွေထဲမှာ ၊အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေ CIA လူတချို့ တောင် ပါခဲ့ကြတယ်ဗျ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ် UN General Assembly မှာ Raphael ကိုယ်တိုင်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ genocide ကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ ကျူးလွန်သူကို အပြစ်ပေးရေး ဥပဒေဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အလွန်မှာ ဗလ ထွက်ခါစ လူပျိုပေါက်လေးလို သန်စွမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ အားကောင်းစ ဗလ နဲ့ ရာဇဝတ်ကောင် မီလိုဆီဗစ် နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို အလဲလဲအကွဲကွဲဖြစ်အောင် ထိုးနှက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အချုပ်အချာအာဏာဆိုတဲ့ ဒိုင်းနဲ့ ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားလဲ အဲ့ဒီ ဒိုင်းကိုပါ ကွဲထွက်သွားအောင် လက်သံပြောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ရာစုမှာတော့ Genocide Watch လို အဖွဲ့အစည်းတွေ International Criminal Court လို နိုင်ငံတခုချင်းစီရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာ ထက်ပိုပြင်းတဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာရှိတဲ့ တရားရုံးတော်တွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီ။
ဒါဟာ Dr.Raphael Lemkin ရဲ့ ဥာဏ်ပညာ အားထုတ်မှု၊ ဇွဲထက်သန်မှု နဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုတို့ ကြောင့်ပါပဲ Dr. ရဲ့ ဒီကြိုးပမ်းမှုအတွက် ကောင်းသောအစားရပါစေသတည်း
နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ဟစ်တလာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဂျူးကလေးတွေထဲမှာ အိုင်စတိုင်းလို genius ဘယ်နှစ်ယောက်ပါသွားမလဲ။ အဲ့ကလေးတွေထဲမှာ အိုင်းစတိုင်း မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ သီအိုရီတွေကို ရှင်းထုတ်မဲ့ ကလေးတယောက်လောက် မပါနိုင်ဘူးလားတ တကယ်လို့ပါသွားခဲ့ရင် လူ့သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုဟာ နှစ် ဘယ်လောက် နောက်ဆုတ်သွားပြီလဲ အိုင်းစတိုင်းစခဲ့တဲ့ ရူပဗေဒသီအိုရီအချို့ဆို ခုထိ ဘယ်သူမှ